Game of Thrones သည်အလွန်ချိုသာသောအဆုံးသတ်တော့မည်ဖြစ်သည် eReaders အားလုံး
ကျနော်တို့စာအုပ်ဆိုင်၏ဆိုက်ရောက်ဘို့စောင့်ဆိုင်းနေစဉ် ဆောင်းရာသီလေA Song of Ice and Fire Saga ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဝတ္ထုကိုရေးသားသူကပြောကြားခဲ့သည် Thrones ၏ဂိမ်းသူ၏ပို။ ပို။ လူကြိုက်များစာပေ Saga အပေါ်အခြေခံပြီးစီးရီး။ မင်းရဲ့အတွေးတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့သူရေးတာကိုသူကိုယ်တိုင်ရည်ညွှန်းသင့်တယ်လို့မင်းတော်တော်များများကထင်ကောင်းထင်ကြလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်သူကအဖြစ်အပျက်တွေကိုသူတက်ရောက်တဲ့အခါသူပြောတဲ့စကားအတွက်သတင်းဖြစ်လာတယ်။
ဤအခါသမယတွင်မာတင်ပြောခဲ့သည် Thrones ၏ဂိမ်းကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည် ၎င်းသည်ခါးသောချိုသောနိဂုံးရှိနိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့အများစုပြီးသားဖြစ်သည်။ ဤသည်သံသယများအတွက်သတင်းတိုးချဲ့စေသည် ရေခဲနှင့်မီးသီချင်း.
"ဘယ်လို (ဒီ Saga) ဘယ်လိုနိဂုံးချုပ်မယ်ဆိုတာငါမပြောနိုင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါဟာပျော်ရွှင်ဖွယ်ဇာတ်သိမ်းခန်းထက်ပိုပြီးခါးသီးလှတဲ့နိဂုံးဖြစ်နိုင်တယ်" လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။
ဤစကားများသည်မာတင်၏လက်မှတ်ဖြစ်သည်။ သူသည်သူ၏လက်ရာကိုပေးမည်ဟူသောအဆုံးသတ်ကိုမဆုံးဖြတ်ရသေးပုံရသည်၊ သို့သော်ရှုပ်ထွေးမှုကြောင့်အလွန်ရှုပ်ထွေးသွားမည့်အရာတစ်ခုကိုအဆုံးသတ်စွန့်ခွာရန်မကြိုးစားတော့ကြောင်းသူအတည်ပြုသည်။ အဆိုပါ Saga နှင့်အထဲတွင်ပေါ်လာသောများစွာသောဇာတ်ကောင်များ၏။
ယခုအချိန်တွင်၏အဆုံးသည် ရေခဲနှင့်မီးသီချင်း နှင့် Thrones ၏ဂိမ်း ဝေးနေဆဲပုံရသည်, နှင့်၎င်း၏ရေးသားသူဝတ္ထုတစ်ခုချင်းစီ၏ထုတ်ဝေဘို့ယူသောအချိန်ကိုယူဆက်လက်လျှင်။ သတိရပါ ဆောင်းရာသီလေ ယခုနှစ်အစတွင်ဈေးကွက်ကို ၀ င်ရောက်ရန်မျှော်လင့်နေပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်နှောင့်နှေးမှုတစ်နှစ်ထက်ပိုပြီးစုဆောင်းထားပြီးဖြစ်သည်၊ ထိုစာအုပ်ကိုရေးသားရန်အချိန်ယူရ ဦး မည်ဖြစ်သည်ဟုကောလာဟလများအရသိရသည် မပြီးသေးဘူး
မင်းအဲဒီလိုထင်လား Thrones ၏ဂိမ်း ခါးသီးတဲ့ချိုသာမှုမရှိတဲ့အဆုံးသတ်ရနိုင်မလား။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ယေဘုယျ » NOTICIAS » Game of Thrones သည်အဆုံးတွင်ခါးသောချိုသောအဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်
Rakuten သည် FC Barcelona ၏အဓိကစပွန်ဆာဖြစ်လာသည်